အတူနေချစ်သူက တည်းခိုခန်းမှာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်သွားတာကို ခံလိုက်ရတဲ့ ၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး – Maharmedianews
2019 မတ်လ 25 နေ့က မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပခုက္ကူမြို့နယ် အမှတ်11ရပ်ကွက် ရွှေလမ်း4လမ်း ရွှေစည်းစိမ်တည်းခိုးမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရက်စက်စွာ လူသက်မှုနဲ့ပက်သက်ပီး သေဆုံးသူ ဟာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်သာ မြို့နယ် 8ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးနေအိမ်က ထွက်သွားတာ တစ်နှစ် ပြည့်တော့မှာ အိမ်ကို အလုပ်လုပ်ရန်ပြောထွက်သွားပြီး ပခုက္ကူမှာ နိုင်လင်းအောင် အသက်28နှစ် နဲ့အတူ ပေါင်းနေထိုင်ခဲ့တာပါ။
သေဆုံးသူမှာ အသက် 17နှစ်ဖြစ်ပီး ရန်ကုန် ရှိနေအိမ်ကိုမပြန်တာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မှာပါ နိုင်လင်းအောင် ဆိုသူနှင့် ပေါင်းသင်းနေထိုင်နေသည်မှာ သေချာပေါက်သိပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူသေဆုံးချိန်မှာ အဲ့နိုင်လင်းအောင်ဆိုသူ ရှိမနေပါဘူး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေပါတယ်။
အရင်ကလည်း နိုင်လင်းအောင်ဆိုသူမှာ လူသတ်မှုနှင့် ထောင်ကျ ခဲ့ဖူးတယ်လို့ကြားသိရပါတယ် ပီးတော့ WY စိတ်ကြွဆေးပြား ရောင်းဝယ်ပီး သုံးစွဲ နေသည်ကိုလည်း အတိအကျသိထားပါတယ် အဲ့တော့ အဓိကပြောချင်တာက အဖြစ်မှန်ပေါ်ဖို့ တရားခံပေါ်ဖို့ လိုအပ်တာပေါ့နော်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဒီလို အဖြစ်မျိုးတေ အမျိုးသမီးများထပ်မကြုံရအောင် ဖော်ထုတ်စစ်ဆေးပေးစေလိုပါတယ်
ညီမလေး မေမြတ်မွန်လည်း နောင်ဘဝဆက်တိုင်း ဒီလို အဖြစ် မျိုးနဲ့မကြုံပါရစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
← သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အသံချဲ့စက်သံတွေနဲ့ ဆူညံနေပါသလား. . .တိုင်လိုက်ပါ. ..ဒီဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူလို့ရပါတယ်
ငွေကြေး အဆင်ပြေချိန်မှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသလို. …ဆင်းရဲချိန်မှာရော လက်တွေ မြဲမြဲတွဲထားနိုင်မလား? →
ဘ၀ တစ်ခုကို အတူတည်ဆောက်ကြတဲ့အခါ ငွေကြေးချမ်းသာမှု ထက် စိတ်ချမ်းသာမှုက ပိုအရေးကြီးပါတယ်. . .ငွေကြေးချမ်းသာမှုနောက်ကို လိုက်ရင်း ပူလောင်နေရတာထက် မရှိအတူ ရှိအတူ လက်တွဲပြီး ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းရတာက ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ် ဘ၀အတွက်
ချစ်သူနဲ့ စကားများပြီး ရေကန်ထဲ ခုန်ချသွားတဲ့ လူငယ်တစ်ဦး
March 26, 2019 admin555 Comments Off on ချစ်သူနဲ့ စကားများပြီး ရေကန်ထဲ ခုန်ချသွားတဲ့ လူငယ်တစ်ဦး